Ikhaya AMAKHASI E-CLASSIC I-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Ikhredithi ku-CNN
I-LB iveza Indaba Egcwele Yebhola Legend ngesidlaliso "Inkosi". Indaba yethu ye-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Impilo nokuvuka kuka-Eric Cantona. Isikweletu Sezithombe: CNN, Instagram nePinterest.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngeqhaza lakhe ukuvuselela iManchester United njengamandla ebhola kuma1990s. Kodwa-ke bambalwa kuphela ababheka i-Eric Cantona's Biography okuyinto ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
U-Eric Daniel Pierre Cantona wazalwa ngosuku lwe-24th ngoMeyi 1966 eMarseille eFrance. Wayengowesibili ezinganeni ezintathu azalwa ngunina, u-Éléonore Raurich nakuyise u-Albert Cantona.
Ingane u-Eric Cantona onina Éléonore Raurich. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Isizwe saseFrance sobuzwe obuMhlophe kanye nezimpande zase-Italy, isiFulentshi kanye nezimpande zaseSpain-Catalan sakhuliswa endaweni yaseCaillols eMarseille, lapho sakhulela khona kanye nabafowabo uJean Marie noJoel.
Ukukhula ezweni lakubo lokuzalwa, umndeni kaCantona wawumpofu kakhulu. Noma kunjalo, wayenobuntwana obujabulisayo obabonakala ngebhola lomgwaqo eliqashelayo nokwazisa ngobuhle bendawo yaseMedithera ezungeze ikhaya labo.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba ye-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngesikhathi uCantona eseneminyaka eyi-15, waqala ukudlala ibhola ehlelekile eklabhu yasendaweni SO Caillolais lapho aqala khona njengomshayimagoli kodwa washeshe wabona ukuthi ubukhulu bokuthi yikuphi ukuhlasela kwegoli kushibilika.
U-Eric Cantona wayeneminyaka engu-15 lapho eqala ukudlalela i-Local Club SO Caillolais. Isikweletu Sezithombe: Pinterest.
Ngakho-ke, wazulazula ebheke phezulu, ejabulela yonke inqubo kodwa wama ngesikhashana sokuphikisana negoli lokuphikisa njengesikhungo esiya phambili. Njengoba abonakale emidlalweni engaphezu kwe-100 ye-So Caillolais, uCantona usethe isikebhe sekilabhu i-Auxerre lapho abenethemba lokushintsha khona ubuchwepheshe.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
UCantona wafika e-Auxerre eneminyaka engu-16 futhi ebukeka njengongenacala. Umdlali webhola lezinyawo wachitha iminyaka emibili esebenza ezinhlwini waze wagcina ukwenza ubuchwepheshe bakhe ngesikhathi semidlalo ye-4-0 yeligi edla umhlanganiso kuNancy.
Isifanekiso sika-Eric Cantona ohlangothini oluhle u-Auxerre. Isikweletu Sezithombe: Telegraph.
Ngemuva kwalokho, umsebenzi kaCantona wabanjwa ngonyaka we-1984 ukuze akwazi ukwenza umsebenzi wezwe ophoqelekile ngemuva kwalokho abolekwe kuMartigues. Yize konke kuqale kahle kuCantona eMartigues, "ukuphela kahle" bekuyigama elalingakakhiwa iminyaka elandelayo ye-7 yomsebenzi wakhe.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
KwakuseMartigues lapho uCantona enza ukubukeka kwakhe kokuqala kobungcweti lapho eshaya omunye umlingani uBruno Martini ebusweni. Ngonyaka olandelayo (i-1988) wahamba yonke i-kungfu ekulweni nomdlali weNantes, uMichel Der Zakarian.
Uchungechunge lwezinhlawulo nokumiswa okwaqalwa ukuthi kuncishiswe uCantona ngokweqile kwakhe kwehluleka ukuveza imiphumela efiselekayo njengoba esethweswe amacala aqondiswa izigwegwe eMarseille, Bordeaux, Montpellier naseNimes lapho ememezele khona umhlalaphansi wakhe wokuqala ebholeni lase1991.
U-Eric Cantona wabethelwa amacala okuqondiswa kwezigwegwe ukuze enze ingxenye engcono yomsebenzi wakhe. Isikweletu Sezithombe: Pinterest.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Ukwenza ngokweluleko lomngani wakhe oseduze nomlandeli omkhulu - Michel Platini, UCantona ubuyile ebholeni lezemidlalo eSheffield ngoLwesithathu lapho ayenesikhathi esifushane. Ngemuva kwalokho uchithe izinyanga ezimbalwa eLeeds United futhi wasiza ikilabhu ukuthi liphumelele isicoco sePremier League.
Ukuqhekeka okukhulu kukaCantona akuzange kube kudala ngemuva kwe-1993 lapho esiza iManchester United ukuthi iphumelele isicoco sayo sokuqala seligi eminyakeni ye-26. Ngama-feat, uCantona waba ngumdlali wokuqala ukunqoba isicoco seligi uNdunankulu namaqembu ahlukene kumasizini alandanayo.
U-Eric Cantona usize iManchester United yanqoba isicoco sePremier League kwi1993. Isikweletu Sezithombe: Telegraph.
Ushesha phambili kuze kube manje ukuphola uCantona uply ukuhweba kwakhe embonini yezokuzijabulisa njengomdlali. Umdlali wakhe wokuqala obambe iqhaza ufike ngemuva kokumiswa kwe-1995 ebholeni lapho ayedlala indawo yomdlali wombhoxo kwifilimu yamahlaya yaseFrance ethi "Le bonheur est dans le pré". Useke wasebenza emafilimini amaningi kusukela kudala waba ngu- "Ulysses & Mona". Abanye, njengoba besho, umlando.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Kude nobunzima bomsebenzi wakhe webhola, uCantona wayenomshado ongenazo izisulu nomkakhe wokuqala u-Isabelle owamzalela izingane ezimbili, uRaphael noJosephine ngaphambi kokuba bahambe ngezindlela ezihlukile e2003.
Ukuqhubekela phambili, uCantona wahlangana nomlingisi uRachida Brakni ngenkathi edlala kwifilimu ethi L'Outremangeur. Baqala ukuthandana kungekudala futhi baqhubeka nokuganwa e2007. Umshado wabo ubusiswe ngendodana u-Emir.
U-Eric Cantona nonkosikazi wakhe wesibili uRachida Brakni. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Ngokuphathelene nempilo yomndeni kaCantona, uvela kumndeni wesigaba esiphansi samalungu e-3. Sinikeza imininingwane eyiqiniso mayelana namalungu omndeni wakhe asheshayo futhi anwetshiwe.
Mayelana nobaba ka-Eric Cantona: U-Albert ungubaba kaCantona. Usebenze njengomhlengikazi wezifo zengqondo ngesikhathi sokuphila kwenganekwane yebhola lezinyawo esemncane futhi waba ngumdwebi wezinhlungu. UCantona uphakamisa u-Albert ngokuwayala ukuthi bawubuke umhlaba wonke njalo, babazise ubuhle bawo futhi bafunde kokwehlelwa usizi okukuwo.
U-Eric Cantona noyise u-Albert. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nonina ka-Eric Cantona: U-Éléonore Raurich ungumama kaCantona. Wasiza ukukhulisa uCantona nabafowabo futhi kwaba yithonya elihle kakhulu empilweni kaCantona. Wamnika ukuzethemba akudingayo ukuze aziveze futhi wamkhuthaza ukuthi angaba yinoma yini abeka inhliziyo yakhe kuyo.
Mayelana nezingane zakubo ka-Eric Cantona: UCantona unezingane zakubo ezimbili nje kuphela, umfowethu omkhulu okhonjwa njengoJean Marie kanye nomfowethu omncane ogama lakhe linguJoel. UJean wayekade esebenza njengezemidlalo ngaphambi kokuzibandakanya kumaphrojekthi wamafilimu ngenkathi uJoel enomsebenzi webhola ongakholakali kangako ngaphambi kokuthi athande ukudlala.
Abafowabo baka-Eric Cantona uJean (kwesobunxele) noJoel (kwesokudla). Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Mayelana nezihlobo zika-Eric Cantona: Ugogo nomkhulu kaCantona kwakunguPedro Raurich noFrancesca Farnos ngenkathi ukhokho wakhe omkhulu nogogo wakhe kwakunguJoseph Cantona noLucienne Thérèse Faglia ngokulandelana. UCantona unabo omalume kanye nomalumekazi abasazokhonjwa, futhi nomshana wakhe, umshana wakhe kanye nabazala bakhe abaziwa ngaleso sikhathi sokubhala.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Ngokuphikisana nokucatshangelwa okubanzi, uCantona akanayo inkinga yesimo kepha ubuntu abaningi abangakwazi ukubuhlangabezana. Umuntu wakhe ukhombisa izimpawu zezimpawu ze-Gemini zodiac njengokukwazi ngokushesha nokusizwela.
Kakhulu, unemizwa ngokomzwelo, ukucabanga futhi uvulekele embula imininingwane ngempilo yakhe yangasese neyangasese. Izintshisakalo zakhe nezinto zokuzilibazisa kufaka phakathi ukudlala ibhola lolwandle, ukwenza, ukubhala kanye nokuchitha isikhathi nomndeni nabangane.
U-Eric Cantona uthanda ukudlala ibhola lasolwandle. Isikweletu Sezithombe: Pinterest.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Uyazi ukuthi uCatona unesilinganiso esilinganiselwe se-net 25 million ngesikhathi sokubhala? Umlingisi webhola lezinyawo owaziwa nge-cum wabeka izisekelo zomcebo wakhe njengomdlali ngaphambi kokuzibandakanya ngokuphelele kwezokuzijabulisa.
U-Eric Cantona ungomunye wezinganekwane ezimbalwa zebhola ezenze zaba nkulu ngemuva kokuthatha umhlalaphansi. Isikweletu Sezithombe: Veza.
Izimpahla ezifakazela ngengcebo enkulu yenganekwane futhi zinikeza inking indlela yakhe yokusebenzisa imali zibandakanya ukwakhiwa kwakhe kwe- $ 2m esifundeni saseFontenay-sous-Bois saseParis. Yize kungekho okuningi okwaziwayo ngokuqoqwa kwezimoto zakwaCantona, kukholakala ukuthi unenqwaba yokugibela okwedlule okwedlulisa umqondo wakhe wesitayela.
Amaqiniso we-Eric Cantona Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Siyabonga ngokufunda kuze kufike kulesi sigaba. Lapha, sinikezela ngamaqiniso angaziwa ongakaze wazi ngo-Eric Cantona.
Inkolo: UCantona usazokwengeza obala ukuzihlanganisa kwakhe nenkolo. Futhi kuthiwa akakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Yize kunjalo, uyakholelwa kwezinye izimfanelo ezinhle njengokuqamba, ukuvuma nokuphana.
Ukubhema nokuphuza: Unikezwa ukubhema futhi ngaphandle kwesikrini futhi aphuze ngendlela efanele. Ucwaningo olusondele emaphethini akhe okubhema luveza ukuthi unamathela kubhema ugwayi njengakuyi-cannabis kanye nezinye izidakamizwa zokuzijabulisa.
U-Eric Cantona ubhema futhi aphuze ngendlela efanelekile. Isikweletu Sezithombe: ISpool ne Pinterest.
Ama-tattoos: Inganekwane ingeyezitshalo zakudala zabadlali bebhola abangenawo ama-tattoos ngesikhathi sokubhala. Futhi akukho okungahambisani naye okuthola ukuthi amukele ubuciko bomzimba njengoba kade eledlula phambili nothishanhloko bakhe.
Okushiwo Igama: Uyazi ukuthi igama elithi Eric lisho ukuthi “Oyedwa” noma “uMbusi” ngenkathi elithi “Cantona” igama lomsuka waseFrance elisho ukuthi “Ngiyabonga”. Ngaphezu kwalokho, wabizwa ngokuthi "The King" ngobuhlakani bakhe bebhola eNgilandi.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Eric Cantona yethu Yobuntwana Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.